Monday June 29, 2020 - 08:54:28 in News by Hadhwanaag News
"Waxaa dhacday xilliyo ay qolyo Qaraamidha la dhihi jiray oo kharibnaa ay Xaramka qabsadeen"
Mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in tani ay tahay habka kaliya ee ay awood ugu yeelan karaan sameynta qorshayaal ay dadku ku kala fogaynayaan, taasi oo dadka ka dhigi doonta in ay si nabad ah u cibaadaystaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu soo dhaweysay go'aankaasi Sucuudiga, waxaana wasiir ku xigeenka arrimaha diinta ee Soomaaliya, Cismaan Aadan Dhuubow, uu sheegay in bilihii dhawaaaba laga arrisnayay waxa laga yeelayo arrinta Xajka ee sanadkan.
"Ka dowlad ahaan iyo ka mas'uuliyad ahaanna waxaan leenahay dareenka caalamka oo si gaar ah iyaga ku ahaa…oo amuurtaan culeyskeeda leh oo aan garaneyno in uu aafeeyay kulli. Go'aankaasi ay qaateen, ka dowlad ahaan waxaan u aragnaa mid waafi ah oo aan soo dhaweynayno," ayuu yiri Cismaan Aadan Dhuubow.
"Waxaa dhacday xilliyo ay qolyo Qaraamidha la dhihi jiray oo kharibnaa ay Xaramka qabsadeen oo xujey badan ay ku laayeen. Asalkooda Shiica ayay ahaayeen nimankaasi, oo xujeydii ay laayeen oo Xajkii ay dadka ka hor istaageen waa ay soo martay laakiin xilli cudur loo joojiyay taariikhda ma soo marin," ayuu yiri Sheekh Maxamed Cabdi Umal.
Marka laga soo tago saameynta diimeed ee ka dhalatay cudurka Covid-19 iyo tallabadaasi Sucuudigu uga hortagayo faafitaanka cudurkani safmarka ah, waxaa dhanka kale arrintaasi ay sababtay saameyn dhaqaale. Muslimiinta gudanaya waajibaadka Xajka ayaa sanad kastaa waxay qiyaastii 12 bilyan oo doolar ku bixin jireen dal-ku-gal, cunno iyo meel ay hoteello ay seexdaan xilliyada Xajka. Sidoo kale waxaa ka macaashi jiray shirkadaha duullimaadyada, kuwa gooya tigidhada iyo kuwa kale ee ka shaqeeya arrimaha Xajka.
Dhaqaalahaasi ayaa u dhigma 20% dakhliga dalka Sucuudiga marka laga reebo dhaqaalaha uu dalkaasi ka helo saliidda.
Shirkadaha xujeyda qaada ayaa waxa ay sanadkan ku khasbanaadeen in dad badan ay u celiyaan kharashkii ay la bexeen ee ay Xajka ku aadi lahaayeen, waxaan sida shirkadaha qaar ay sheegayaan sanadkan soo wajahay dhaqaale xumo aad u weyn.
Dowladda Sucuudi Carabiya waxay sidoo kale sanadkan lumineysaa arrin ay aad ugu faani jirtay oo ah in sanad kastaa ay martigeliso kulanka ugu weyn caalamka oo ah Xajka, kaa oo sidoo kale ay dhaqaalena ka heli jirtay.